Hawlgallo dad lagu xir-xiray oo Garowe ka socda dilkii xildhibaanka kaddib iyo aaskiisa oo loo diyaargaroobayo. – Radio Daljir
Agoosto 6, 2012 5:59 b 0
Garowe, Aug 06 – Ciidamada nabadgalyada ee magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa saaka bilaabay hawgallo ballaaran oo ku aaddan dhinaca amniga, kuwaasi oo laga faliyey dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada, kaddib markii saaka la dilay mudane ka tirsanaa baarlamaanka Puntland.
Boqolaal qof, ayaa lagu soo qabtay hawlgalladaasi oo illaa haatan ka socda magaalada, iyadoo ciidanka amnigu dadka ay ka qabqabteen waddooyinka, suuqyada magaalada, guryo deegaan ah iyo goobo kale oo muhiim ah sida ay Radio Daljir u sheegeen saraakiil amniga ku shaqo lahi.
Dadka la soo xir-xiray ayaa la geeyey saldhigyo kala duwan oo magaalada ka mid ah, kuwaasi oo ay haatan ku socdaan baaritaanno lixaadleh oo ku aaddan ku lug-lahaantooda falal-dambiyeeddo gobolka ka dhacay oo uu ugu dambeeyey midkii saaka lagu dilay mudane baarlamanka Puntland ka tirsanaa.
Saraakiisha nabad-galyada ayaa sheegay hawlgalladaan in ay yimaadeen kaddib markii saaka subaxnimadii hore dil loo gaystay alle ha u naxariistee Xildhibaan Shaybe Sheekh Maxamed oo xubin ka ahaa wakiillada Puntland, kaasoo la toogtay xilli ka soo baxay masaajid uu ku tukaday salaaddii subaxnimo, una dhawaa gurigiisa.
Dhinaca kale aaska xildhibaan ayaa haatan loo diyaar-garoobayaa, iyadoo lagu wado in la aaso marka la tukado saaladda duhur, waxaana lala dhawrayaa si jameecada masaajidku jinaasada ugu tukadaan.
Aaska Marxuub, ayaa waxaa ka qaybgali doona madaxda sarsare ee dawladda Puntland, iyagoo halkaasina la filayo in ay ka jeediyaan khudbado ay uga hadlayaan dhacdad saaka iyo hawlgallada ammaan ee socda.